Kutheni kufuneka uqalise ii-Indices zokurhweba-Funda ukurhweba
Kutheni kufuneka uqalise ukurhweba ii-indices
Nawuphi na umrhwebi, nantoni na enikezela ngamabhaso amakhulu iyaqwalaselwa nangoluphi na usuku. Phakathi kweeasethi ezikhoyo, iimali zithengiswa ngokubanzi.
kunjalo, kubathengisi bafumene umvuzo okhangayo kwii-indices zokurhweba, kwaye uninzi lwabo bathabatha amathuba abo.
Ngaphandle koko, ii-indices zokurhweba zibonelela ngokhetho olongezelelweyo lokwahlula phakathi isicwangciso-nkqubo sokurhweba somrhwebi.
Ngamanye amaxesha, ii-indices zinikezela ngembuyekezo ephezulu nangaphezulu kwestokhwe esimele sona. Ke, unokuzibuza, kutheni le nto kufuneka ndiqale ngokurhweba ii-indices?
Okokuqala, kuya kufuneka unoluvo olulungileyo lokuba ii-indices zisebenza njani kwaye utshintsho kwi-stock luchaphazela njani ixabiso lesalathiso ngokubanzi.
Yiba nee-Indices kwiPotifoliyo yakho yoRhwebo
Ukuba wena njengabarhwebi be-HYCM, baya kufumana indumiso eninzi ngee-indices zokuthengisa. Kuyabonakala ukuba, awunyanzelekanga ukuba uphume uyokukhangela enye njengoko sele sikugubungele.
Isalathiso sisilinganiselo sotshintsho olwahlukileyo kwisitokhwe esimele icandelo lentengiso kunye nolwalathiso lwentengiso kunye nendlela enokwenzeka ngayo.
Kulula kwaye kutshiphu ukutyala imali kwisalathiso kunestokhwe ngasinye kwisalathiso ngokwaso.
Naluphi na utshintsho kwixabiso lesitokhwe luchaphazela ixabiso lesalathiso.
Isitshixo seziphumo ezilungileyo kuyo nayiphi na imisebenzi yorhwebo isekwe kwinqanaba lokuqonda komrhwebi malunga neendlela zentengiso kunye nokuba bavavanya njani amaxabiso esitokhwe.
Ke, uqala njani?
Izinto zokuqala kuqala, izinto ezichaphazela amaxabiso zinokunceda kakhulu ekuboniseni ulwalathiso lwamaxabiso xa ubeka amashishini.
Ngapha koko, ayizizo zonke iindaba eziza kuba nefuthe kwisalathiso, kodwa indlela uluntu lwentengiso olusabela ngayo kubo yeyona nto ibalulekileyo.
Ngaphambi kokwenza izigqibo zakho zokurhweba, kuya kufuneka ukhumbule ukuvavanya zonke ii-indices eziphambili kunokulandela isalathiso esinye kuphela. Ngale ndlela, uya kuba nakho ukufumana umfanekiso ochanekileyo wenqanaba lentengiso yangoku.
Kutheni le nto kufuneka urhwebe ii-Indices?
Izalathiso zokurhweba ziza nezibonelelo ezininzi. Kuqala, bavula amajelo akho okubhengeza kwisitokhwe esitokisini esifakwe kwisalathiso.
Awudingi ukuthenga amasheya ngokwahlukeneyo, kungoko kungqinwa kuluncedo kwiindleko kunye nokwahlula iphothifoliyo yakho.
Kwakhona, ii-indices zokurhweba zikunika indlela elula yokurhweba ngeemarike zentengiso ekusenokwenzeka ukuba awazi nto ngazo.
Ukukhetha isitokhwe esithile sokurhweba kwimarike yesitokhwe engaqhelekanga ngamanye amaxesha kunokuba yinkohliso, kodwa isalathiso uqobo ukuba siqheleke ngakumbi kwaye singazinzanga kangako.
Ngaphaya koko, abathengisi bezobuchwephesha bafumanise ii-indices zokurhweba ngokubulela kakhulu kwindlela ii-indices ezisebenza ngayo ngokunxulumene namanqanaba obuchwephesha kunye neepateni.
Bahlala behlonipha amanqanaba obuchwephesha aphambili, iipateni zetshathi, amanani ajikelezayo, yiyo loo nto zibonelela ngamathuba amahle okuthengisa.
Ngokusisiseko, ii-indices zokurhweba zilula njengoko zifuna nje ukuba ufumane isalathiso ukhululekile kuso, usasaze ukubheja okanye urhwebe iiCFDs, uthathe isigqibo kwimarike nokuba yeyokuthengisa okanye yokuthengisa, ukubeka indawo indices urhwebo, kunye nokubeka esweni kwaye uvale ishishini lakho.
Izalathiso zokurhweba yeyona ndlela igqibeleleyo yokutyala imali kubatyali mali kunye nokufumana uzinzo.
Kukulungele ukuqala kuqala ngeakhawunti yeedemo ukuze uqonde ngokupheleleyo zonke iindlela ezibandakanyekayo kwii-indices zokuthengisa. Ngokuqinisekileyo kufuneka ibe luhambo olunomdla.